रोटिको कारण पति पत्नीको डिभोर्स !! हेर्नुहोस यस्तो छ कारण !! - Enepalese.com
रोटिको कारण पति पत्नीको डिभोर्स !! हेर्नुहोस यस्तो छ कारण !!
इनेप्लिज २०७४ चैत १७ गते २०:०९ मा प्रकाशित
विवाहित जोडीको सम्बन्ध विच्छेद हुनका लागि कुनै गम्भीर कारण नै चाहिन्छ भन्ने सोँच्नुभएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ ।
कहिलेकाहीँ यस्ता उटपट्याङ कारणले गर्दा लोग्नेस्वास्नीको डिभोर्स हुँदो रहेछ, सुन्दैमा अचम्म परिन्छ ।
भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणे सहरमा एकजना महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेदको माग गरी अदालतमा मुद्दा हालेकी छिन् । उनले सम्बन्ध विच्छेद माग गर्नुको कारण सुन्दै साँच्चीकै हाँसो उठ्छ ।
ती महिलाको दाबी अनुसार उनका लोग्नेको अचम्मको रोटीप्रेमका कारण डिभोर्स माग्नुपरेको छ । समाचार अनुसार ती महिलाका लोग्नेले सधै आफ्नी पत्नीलाई २० सेन्टिमिटर व्यास भएका रोटी तयार पार्न आदेश दिन्थे । यदि रोटीको आकार त्यसभन्दा तलमाथि भएमा उनले पत्नीलाई गालीगलौज गर्ने तयार कुटपिट गर्ने गर्दथे ।